Restaurants in North Dagon | MyLann – Online Restaurants Directory and Food Reviews in Myanmar
Restaurants in North Dagon
Price Range - 1000Ks - 3500Ks
Phone - 09 783888909
Address - No. 541, Boson Pat Street, 19th Quarter, North Dagon Township. ()
Phone - 09 31452829
- ၀က်သားဆလပ်၊ ကင်ချီဟင်းချို၊ မြေအိုးထမင်းသုတ်
Address - No.879, Pinlon Road, 34 Quarter (အမှတ်.၈၇၉၊ ပင်လုံလမ်း၊ ၃၄ လမ်း)
Ah Chit Ywar
Phone - 09421732607, 09 43136774
Address - 105/2/B, Ta Pin Shwe Htee Road, Corner of Anawyahtar Road, Ward (38), North Dagon (အမှတ် ၁၀၅/၂/ဘီ၊ တပင်ရွှေထီးလမ်း၊ အနော်ရထာလမ်းထောင့်၊ (၃၈)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံ)
Phone - 09 255794186
Address - No.186, 32-Ward, Pin Lon Road (အမှတ်.၁၈၆၊ ၃၂-ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်းမကြီး)
Phone - 09 31528117
- အာလူးပူရီ၊ ကြက်ကချင်၊ ကြေးအိုးဆီချက်
Address - No.268, Pin Lon Road, 30-Ward (အမှတ်.၂၆၈၊ ပင်လုံလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်)
Royal Bakery & Cafe'
Phone - 09 33406379
Address - No.9, Pin Lon Road, 30-Ward (အမှတ်.၉၊ ပင်လုံလမ်း၊ ၃၀-ရပ်ကွက်)
Phone - 09 254263991
- Bul Go Gi (အသားကင်၊အရံဟင်းနှင့်ထမင်းဖြူ)
- Kimchi Stew (ကင်ချီဝက်သားအစပ်ချက်)
- Bibimbab (ထမင်းသုပ်)
Address - National Sports Complex, Pin Lon Road (မြို့နယ်အားကစားဝန်း၊ ပင်လုံလမ်း)
SHAKE(North Dagon Branch)
Address - ()
Phone - 09 5416027
- Milk Ice-cream (နို့ရေခဲမုန့်)
- Domino (ဒိုမီနို)
Address - No.1198, Pin Lon Road, 35 Ward (အမှတ်.၁၁၉၈၊ ပင်လုံလမ်း၊ ၃၅ ရပ်ကွက်)
Taw Win Thu
Phone - 09421141645
Address - 385, 29 Ward, Pyihtaung Su Road, North Dagon (၃၈၅၊ (၂၉)ရပ်ကွက်၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမ၊ မြောက်ဒဂုံ)
Phone - 09 262748588
Address - 36Ward, Pin Lon Road, City Mart, North Dagon ((၃၆)ရပ်ကွက်၊ ပင်လုံလမ်း၊ မြောက်ဒဂုံ)
KSS( North Dagon)
Phone - 09-977934250
Address - No.(7) 33 yard , Pinlone Street ,North Ddagon Township. (အမှတ် (၇) ၃၃ ရပ်ကွက် ပင်လုံလမ်း။မြောက်ဒဂုံ မြို့ နယ်။ )
Phone - 09 73184568, 09 5051658
- Beef Soup Noodle
- Chicken Soup Noodle
- Mixpork & Beef Soup Noodle
- BBQ (Pork
- Chicken/ Pork Rib)
- Steam Cake
- Crispy Pan Cake
Address - No. 488/ 489/ 490, Shwe Tha Pyay Street, 48th Quarter, North DagonTownship (အမှတ် ၄၈၈/၄၈၉/၄၉၀၊ ရွှေသပြေလမ်း၊ (၄၈)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်)
Phone - 09 73079899, 09 428128991
Address - No. 929/ Thin Win Street, Corner of Pin Lon Road, Ward (34), North Dagon Township (အမှတ် (၉၂၉)၊ သင်းဝန်လမ်း၊ ပင်လုံလမ်းထောင့်၊ (၃၄)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်)
Shwe San Aein
Price Range - 3000Ks - 8000Ks
Phone - 09 5380458, 09 262628645
Address - No. 230, Anawyahtar Street, 37 Ward, North Dagon Township (အမှတ် (၂၃၀)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ (၃၇)ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်)